May 2014 – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo soo gabagabeysay imtixaanaadkii guud ee gobolada Puntland.
Wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland ayaa maanta soo afmeertay imtixaanaadkii guud ee Puntland oo ay u fadhiyeen ardayda fasalada 4aad ee dugsiyada sare iyo kuwo fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe […]
May 27, 2014 / News
Imtixamadkii Puntland oo Maalintii Afraad Galay una soo gaba gaboobay fasaladda 8aadka.
Imtixamadkii Puntland ayaa galay Maalintii afraad una soo Afjarmay Fasaladda 8aad isagoo Jawi fiican ku dhamaday. Waxa warbxinta siiyey Websiteka Wasaarada Waxbarashada Madaxa imtixamadka ahna Agaasimaha ku meel gaarka ah […]
Imtixaanka guud ee Gobolada Puntland oo galay maalintii saddexaad.
Waxaa maalintii saddexaad galay imtixaanaadka guud ee shahaadiga gobolada Puntland. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cali Xaaji Warsame ayaa maanta booqday qaar kamid ah dugsiyada waxbarasho ee kuyaala magaalada Qardho […]
May 24, 2014 / News
IMTIXAANKII SHAHAADIHA AHAA OO KA BILOWDAY 70 XARUMOOD GUUD AHAAN PUNTLAND
Toddobaatan xarumood oo ku yaal Puntland ayaa saaka si rasmi ah waxaa uga bilowday Imtixaanaadka kama dambaysta ee ay u fariisanayeen in ka badan 9000 (sagaal kun oo arday). Imtixaankan […]
Wasaaradda waxbarashada Puntland oo kulan usoo gabagabeysay 219 Macalimiin ah oo loo diyaariyay imtixaanka shahaadiga.
Wasarada waxbarashada Puntland oo ku dhawaaqday xiliga la qaadayo Imtixaanaada Shihaadiga ah.
Wasaaradda Waxbarashadda Puntland oo Lacag ugu deeqdey dhismaha Buundooyinka burburay..
Wasiirka waxbarashada iyo wafdi culus oo booqday degmada Dongorayo ee Gobalka Nugaal.
Wasaaradda Waxbarashada puntland oo gaari ku wareejisay Gudoonka waxbarashada gobolka cayn
Madaxwayne ku xigeenka Puntland oo booqday Markii ugu horasay wasaradda waxbarashada Puntland.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashadda Puntland oo La Kulmay Dhigiisa Wadanka Yemen.
Wasiirka Waxbarashada Puntland oo la kulmay Dhiggiisa Itoobiya